Indlela Umculi UDavid Bridburg Wakha Ngayo Umsebenzi Wangempela
Umsunguli Wakho Womculi uDavid Bridburg
Inkolelo yami, ubuciko ulimi olubanzi kunegama elikhulunywayo. Ukunikeza umqondo emiqondweni yobuciko kungukuzijabulisa nokuzilolonga okuqonda okwenza ngamunye wethu abe ngumuntu.
Kafushane, i-Postmodernism ingukuhlanganiswa kwesikhathi esedlule nesamanje. Umcabango wami uyabonakala futhi unengqondo.
Ukubeka imibono yami kunqubo yokuphrinta yindlela yami yokwabelana nomphakathi.
Abantu ababambe iqhaza kwezobuciko bokubukwa basemkhankasweni wokuthola umzimba wobuciko obuthandekayo. Ngiyethemba, sengikulume ukudla kwakho.
Izithombe zami ngasinye zibhaliswe ne-US Copyright Office. Umsebenzi wami awukho kusizinda somphakathi.
UKUTHOLA OKWENGEZIWE KOMUNTU
Ake ngimemezele, nginenkinga yokucubungula izindlebe, ukukhubazeka kokuzalwa. Lesi sifo asitholakalanga ngaze ngaba neminyaka engu-28.
Ngo-1981, ngashiya iBloomfield High School, i-CT, ngaya eNyuvesi yaseHouston ukuyofundela ubunjiniyela. Ngangikhumbula ekhaya, futhi ngikuthola kunzima ukutadisha. Lapho ngifika ekhaya ngineminyaka engu-20, ngaqala ukusebenza ngadlula e-UCONN.
Ukuwela kwezobuciko ngengozi, ngabhalisela amakilasi obuciko bokubukwa ukuze ngifeze ukukhetha kwami ​​okuyisisekelo, futhi ngaba umfundi we-A. Uma ngibheka emuva, imfundo yezobuciko engangikujabulela ukuyithola yayihle kakhulu.
Ngemuva kwekolishi, ngangifuna ukuba ngusomabhizinisi. Imibono yobuciko ehlale ikhona, bengingafuni ukwenza izithombe ezingokomfanekiso noma ezingabonakali. Ukwakha okuthile kweminye imigqa kwakuwukushaya kwami ​​ucingo.
Ngo-2006, ngaba nombono wokuthatha isithombe emdwebeni owodwa omdala ngiwufake emdwebeni olandelayo ngisebenzisa amakhompyutha. Ukube yilokho kuphela ebenginqume ukukwenza, le ndaba ngabe iphelile.
Ngo-2012, ngifunda ngedwa, ngazifundisa i-Photoshop. Ngo-2014, ngangibutha imibono yokungena ekukhiqizeni. Ukusebenza ngamadijithi kunginikeze izindlela ezintsha zokukhipha emazingeni amakhulu namancane.
Ubuciko bami yiPostmodernism. I-axiom yokuqala yePost Modern Art ukuthi konke okwenziwe kwezobuciko sekuvele kwenziwe. Ngokudabukisayo, i-Postmodernism aesthetics yami yintsha ezilalelini.
Namuhla njengomculi ozimele wokushicilela, ngihlinzeka ngekhathalogi yami online.
I-FineArtAmerica Corp, ukuphrinta nokuthunyelwa komhlaba okuvikelekile ngesikhathi esifanele. Ukulethela amaklayenti ami isipiliyoni esihle sokuthenga ngokusebenzisa Bridburg.com.
Onke ama-oda agcwaliswa ngama-Pixels / FineArtAmerica Corp nawo ukwaneliseka Isiqinisekiso (Buyisela Inqubomgomo). Ngemibuzo mayelana ne-oda lakho shayela insizakalo yamakhasimende (ucaphuna inombolo ye-oda) 24hours / day 7days / week. Okwezinsizakalo zamakhasimende e-USA: (877) 807-5901. Okwe-UK Customer Service shayela ku: 0800-014-8971. IPixels Corporation izinze eSanta Monica, CA.
Umbuzo: Ingabe usemishini yokuthola umculi wokuqala? Hlola ukuthi yini eyenza ubuciko obuhlukile kakhulu.